बल्ल बाहिरियो बिर हस्पिटल घटना जिउदै मान्छे मर्नुको भित्री रहस्य ! साली रुदै मिडियामा, लास माथि यस्तो चलखेल (भिडियो सहित)
काठमाण्डौँको वीर अस्पतालमा कोरोनाको कारण देखाउँदै बिरामीलाई मारिएको भिडियो लाइभ सार्वजनिक भएको छ । रुपन्देहीको भैरहवाका एक ब्यक्ति विरामी भएपछि वीर अस्पतालमा भर्ना भएका र उनलाई कोरोनाको कारण मृत्यु देखाउँदै मारेर आँखा झिकिएको भन्दै बब्लु गुप्ता नेपालीले भिडियो लाइभ सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यसपछि यो भिडिओ भाइरल
पुरानी गायिका इन्दिरा भट्टराईको तिमी बिना बोलको गीतको भिडियो सोमबार सार्वजनिक भएको छ । सो गितको भिडियो इन्दिरा अडियो भिडियो म्युजिकमार्फत सार्वजनिक भएको हो । दुई दर्जन बढी गीत बजारमा ल्याईसकेकी भट्टराईले सोमबार सार्वजनिक गरेको तिमी बिना बोलको गीतमा उनीसँगै भुवन प्रकाश बडुको पनि स्वर रहेको छ । सो गितमा
नायक आकाश श्रेष्ठ बेवारिसेलाई खाना खुवाउन पुगे ! पशुपति रुवाबासी, थामिएन कसैको मन…रुदै फर्किए घर (भिडियो सहित)
कुलमान घिसिङ्गको समर्थनमा आजपनि झनै खतरा हेर्नुहोस् ! नेताको घरमा आगो बाल्छौ भन्दै जंगीए (भिडियो सहित)
कुलमान घिसिङ्गकोसमर्थनमा आजपनि झनै खतरा हेर्नुहोस् ! नेताको घरमा आगो बाल्छौ भन्दै जंगीए (भिडियो सहित)
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आज (आइतबार) चार वर्षे कार्यकाल सकिदैछ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले घिसिङलाई औपचारिक रुपमा विदाई गर्ने जानकारी दिएका छन । वि.सं. २०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुभएका घिसिङ वि.सं. २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त हुनुभएको थियो
दुर्गेश थापा र एलिजा गौतमको अभिनय रहेको ‘ घासको माया गाईलाई ’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । आज उक्त गीतको भिडियो ‘इनाकाशी इन्टरटेनमेन्ट ’ नामक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । सर्वाधिक रुचाईएको चर्चित गायक राजन राज सिवाकोटी र गायिका रेखा ढुंगाना कटुवालको स्वर रहेको उक्त गीत मा